Apple ရဲ့ Portrait Lighting Mode ဆိုတာ ဘာလဲ ? – DigitalTimes
Apple ရဲ့ Portrait Lighting Mode ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Apple ရဲ့ Portrait Lighting Mode ဆိုတာ DSLR or Mirrorless Camera များမှာ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ နောက်ခံကို Blur လုပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ဖုန်းရဲ့ အနောက်ကင်မရာ နှစ်လုံးကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Portrait Mode ကို ဓါတ်ပုံနယ်ပယ်မှာ Bokeh လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း Apple က Portrait Mode ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ် Portrait Lighting Mode ကို ထည့်ပေးထားပြီး သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံများမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ အလင်းရောင် Effects များ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Portrait Lighting ကို သုံးနိုင်မယ့် ဖုန်းများ
iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone X တို့မှာ သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ iPhone7Plus မှာတော့ A10 Processor အဟောင်းသာပါတဲ့အတွက် သူ့ကို အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။
Camera App ကနေ Swipe လုပ်၍ Portrait ကို ရွေးချယ်ပါ။ ရိုက်ကူးမယ့် အရာဝတ္ထုကို ချိန်ရွယ်ပါ။ ပြီးရင်အောက်ခြေမှ Portrait Lighting Effects ကို ရွေးချယ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ။
Portrait Lighting Effect ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပြီးမှ ပြောင်းလို့ရပါသလား ?
Portrait Lighting Effect ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပြီးမှ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံဟာ Portrait Mode ဖြင့် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ရပါမယ်။ Effects ထည့်သွင်းဖို့အတွက် Photos App ကို ဖွင့်ပါ။ Portrait Photo ကို ရွေးချယ်ပြီး Edit ပြုလုပ်ဖို့ Slider Icon ကို နှိပ်ပါ။ Editing Tools များရဲ့ အထက်မှာ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် Portrait Lighting Effects Dial ရှိပါတယ်။ Dial ကို လှည့်၍ နှစ်သက်တဲ့ Effect ကို ရွေးချယ်ပြီး အောက်ခြေမှ Done ကို နှိပ်ပါ။
Portrait Lighting ဟာ Filter လား ?
Portrait Lighting ဟာ Filter မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုအပေါ် ကျရောက်နေတဲ့ အလင်းရောင်များကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ Apple က ပြောပါတယ်။ Portrait Mode က အရာဝတ္ထုနဲ့ နောက်ခံကို ခွဲထုတ်ပေးအောင် အသေးစိတ်ကျတဲ့ ဒေတာများကို ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာ သို့မဟုတ် Machine Learning က Portrait Lighting ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Selfie အတွက် Portrait Lighting ကို သုံးလို့ရသလား ?
iPhone X မှာတော့ Selfie အတွက် Portrait Lighting ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ iPhone 8 Plus မှာတော့ အရှေ့ကင်မရာ ၁ လုံးသာပါတဲ့အတွက် သူ့ကို သုံးလို့မရပါဘူး။ iPhone X ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ပင်မ ကင်မရာနဲ့အတူ Face ID အတွက် အသုံးပြုတဲ့ TrueDepth Camera ၁ လုံး အပိုပါပါတယ်။
Apple ရဲ့ Portrait Lighting Mode ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Apple ရဲ့ Portrait Lighting Mode ဆိုတာ DSLR or Mirrorless Camera မြားမှာ ဖနျတီးနိုငျတဲ့ နောကျခံကို Blur လုပျထားတဲ့ ဓါတျပုံမြားကို ဖုနျးရဲ့ အနောကျကငျမရာ နှဈလုံးကို အသုံးပွု၍ ဖနျတီးပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ Portrait Mode ကို ဓါတျပုံနယျပယျမှာ Bokeh လို့ ချေါကွပါတယျ။ ဒီနှဈမှာလညျး Apple က Portrait Mode ရဲ့စှမျးဆောငျခကျြအသဈ Portrait Lighting Mode ကို ထညျ့ပေးထားပွီး သငျ့ရဲ့ ဓါတျပုံမြားမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျဆနျတဲ့ အလငျးရောငျ Effects မြား ထညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။
Portrait Lighting ကို သုံးနိုငျမယျ့ ဖုနျးမြား
iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone X တို့မှာ သူ့ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ iPhone7Plus မှာတော့ A10 Processor အဟောငျးသာပါတဲ့အတှကျ သူ့ကို အသုံးပွုလို့မရပါဘူး။
Camera App ကနေ Swipe လုပျ၍ Portrait ကို ရှေးခယျြပါ။ ရိုကျကူးမယျ့ အရာဝတ်ထုကို ခြိနျရှယျပါ။ ပွီးရငျအောကျခွမှေ Portrait Lighting Effects ကို ရှေးခယျြပွီး ဓါတျပုံရိုကျပါ။
Portrait Lighting Effect ကို ဓါတျပုံရိုကျကူးပွီးမှ ပွောငျးလို့ရပါသလား ?
Portrait Lighting Effect ကို ဓါတျပုံရိုကျကူးပွီးမှ ပွောငျးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဓါတျပုံဟာ Portrait Mode ဖွငျ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓါတျပုံ ဖွဈရပါမယျ။ Effects ထညျ့သှငျးဖို့အတှကျ Photos App ကို ဖှငျ့ပါ။ Portrait Photo ကို ရှေးခယျြပွီး Edit ပွုလုပျဖို့ Slider Icon ကို နှိပျပါ။ Editing Tools မြားရဲ့ အထကျမှာ စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျ Portrait Lighting Effects Dial ရှိပါတယျ။ Dial ကို လှညျ့၍ နှဈသကျတဲ့ Effect ကို ရှေးခယျြပွီး အောကျခွမှေ Done ကို နှိပျပါ။
Portrait Lighting ဟာ Filter မဟုတျဘဲ မကျြနှာ သို့မဟုတျ အရာဝတ်ထုအပျေါ ကရြောကျနတေဲ့ အလငျးရောငျမြားကို အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ ခှဲခွမျးစိတျဖွာခွငျး ဖွဈတယျလို့ Apple က ပွောပါတယျ။ Portrait Mode က အရာဝတ်ထုနဲ့ နောကျခံကို ခှဲထုတျပေးအောငျ အသေးစိတျကတြဲ့ ဒတောမြားကို ကောကျယူနိုငျပါတယျ။ ဉာဏျရညျတု နညျးပညာ သို့မဟုတျ Machine Learning က Portrait Lighting ကို ဖနျတီးပေးပါတယျ။
Selfie အတှကျ Portrait Lighting ကို သုံးလို့ရသလား ?
iPhone X မှာတော့ Selfie အတှကျ Portrait Lighting ကို သုံးလို့ရပါတယျ။ iPhone 8 Plus မှာတော့ အရှကေ့ငျမရာ ၁ လုံးသာပါတဲ့အတှကျ သူ့ကို သုံးလို့မရပါဘူး။ iPhone X ရဲ့ အရှဘေ့ကျမှာ ပငျမ ကငျမရာနဲ့အတူ Face ID အတှကျ အသုံးပွုတဲ့ TrueDepth Camera ၁ လုံး အပိုပါပါတယျ။
အနောက်ကင်မရာ ၂ လုံးပါတဲ့ Samsung Galaxy Jean